Vanadium Budada budada, VB2 - Goodao Technology Co., Ltd.
Vanadium boride (VB2) wuxuu leeyahay qaab dhismeed lix-jibaaran oo muraayad ah oo leh dhibic dhererkeedu yahay 2980 ° C, adkaansho weyn, iyo heerkulka ka-hortagga oksaydhka ee 1000 ° C. Waxaa loo isticmaali karaa walxaha dhoobada ee wax lagu kala hago iyo beeraha kale, waana iska leeyahay ilaa atom atom.
Caanaha molecular VB2
Lambarka CAS 12045-27-1
Cufnaanta 5.1 g / ml
Barta dhalaalida 2980 ℃
Codsiga waxaa loo isticmaalaa walxaha dhoobada isdabajoogga ah iyo beeraha kale. berrinka baytariyada hawada
Wax soo saarka alaabta ee Vanadium diboride:
VB2 waxay leedahay astaamaha barta dhalaalka badan, adkaanta sare, habdhaqanka wanaagsan iyo kuleylka kuleylka, waxayna iska caabbin kartaa daxalka birta la dhalaaliyay. Waxaa loo isticmaali karaa in lagu sameeyo qalabka qaabdhismeedka heerkulka aadka u sarreeya wuxuuna leeyahay codsiyo muhiim ah oo ku saabsan deegaanno aad u daran sida heerkul aad u sarreeya iyo dhalaalida birta. Intaa waxaa dheer, AS oo ah walxaha korantada loogu talagalay baytariyada alkaline, VB2 waxay leedahay awood dheecaan oo ballaaran oo waa aalad tamar cusub. Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa walxaha dhoobada wax lagu qoro iyo meelaha kale.
Codsiga alaabada dibadium loo yaqaan 'Vanadium diboride':
Sida dhoobada ceyriinka ceyriinka ah ee ceyriinka ah, oo loo isticmaalo soo saarista duugista - filim adkaysi u leh iyo iskaabulo
Hore: Budada Tungsten Boride, WB2
Xiga: Budada Cobalt Boride, CoB
Vanadium waxay dhashaa budo bir ah
Vanadium waxay dhashaa Warshadaha budada birta ah
Vanadium waxay dhashaa Warshad budada birta ah
Vanadium wuxuu soosaaraa budada birta ah
Vanadium waxay soosaaraysaa budada birta soosaarayaasha
Vanadium waxay dhashaa budada birta ah Qiimaha